ဂျပန်ကို ဘာကြောင့် သွားလည်သင့်သလဲ ? – YANGON STYLE
ဂျပန်ကို ဘာကြောင့် သွားလည်သင့်သလဲ ?
ဂျပန်နိုင်ငံဆိုတာ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေနဲ့အတူ ခေတ်မှီတိုးတက်မှုတွေကိုပါ ယှဉ်တွဲမြင်တွေ့နိုင်တဲ့ နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂၁ ရာစုနှောင်းပိုင်းတွေမှာဆိုရင် ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ ရိုသေလေးစားဂါဝရတရားထားတတ်မှု စည်းကမ်းရှိမှု အချိန်လေးစားမှု တိကျပြတ်သားမှုတွေဟာ အများနဲ့မတူပဲ စံပြအတုယူဖွယ်ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ အာရှနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပေမယ့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမှာတော့ ကမ္ဘာ့ထိပ်ဆုံးအဆင့်တွေမှာ အနောက်နိုင်ငံကြီးများနှင့် ရင်ဘောင်တန်းနေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်သစ်နည်းပညာတွေမှာ ထိပ်ဆုံးကရပ်တည်နေသလိုပဲ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုမှာလည်း အံသြဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်။ ချယ်ရီပန်းတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီးလဲ နာမည်ကျော်တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံကို တစ်သက်မှာ တစ်ခါတော့ အလည်အပတ်ရောက်ခြင်မိပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံကို ဘာကြောင့်သွားရောက်လည်ပတ်သင့်လည်း ဆိုတာကိုလည်း ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဂျပန်ဆောင်းဦးရာသီဖြစ်တဲ့ မတ်လမှ မေလအထိ မှာတော့ ချယ်ရီပန်းတွေဟာ လှိုင်နေအောင်ပွင့်တတ်ကျပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်တွေမှာဆို ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က ခရိီးသွားတွေဟာ ချယ်ရီပန်းအလှကို ခံစားဖို့အတွက် တကူးတကကို လာရောက်လေ့ရှိပါတယ်။
World Heritage Sites ၂၁ ကိုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံ
ခေတ်အဆက်ဆက်အစဉ်အလာ ကြီးမားတဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတို့ရဲ့သမိုင်းနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေဟာ
နေရာတိုင်း တည်ရှိနေပါတယ်။ ကမ္ဘာအမွေအနှစ်စာရင်းဝင် နေရာပေါင်းများစွာကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဖူဂျီတောင် အပါအဝင် အင်မတန်လှပထူးဆန်းတဲ့ သဘာဝတရားတွေကိုပိုင်ဆိိုင်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။
Anime Lover တွေအတွက် အိမ်မက်မြို့တော် နိုင်ငံ
ဂျပန်ကာတွန်း ဇာတ်ကောင်တွေဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို လွှမ်းမိုးလျက်ရှိပါတယ်။ စီးပွားမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ အိုဆာကာမြို့ကတော့ Anime Lover အတွက်တော့ ကမ္ဘာတစ်ခုပါပဲ။
ဂျပန်ရိုးရာ အစားအစာတွေဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပြီး သဘာဝအရသာတွေကို အခြေခံထားတာမို့ နာမည်ကျော်လှပါတယ်။ နေ့စဉ်စားသောက်တဲ့ အစားအသောက်ပုံစံ ကဖြင့် ကမ္ဘာ့သက်ရှည် ကျန်းမာ လူမျိုးများအဖြစ်ရပ်တည်နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သိပ္ပံပညာရပ် နှင့် စက်မှုပညာ တိုးတက်လွန်းတဲ့နိ်ုင်ငံ
ခေတ်မှီနည်းပညာများကို အသုံးပြုပြီး လူနေမှုအဆင့်အတန်းများစွာမြင့်မားလှပါတယ်။ သွားရေးလာရေး မှအစစားသောက်ရေးအတွက်လွယ်ကူစေရန် စက်များကို အသုံးပြု ပြီး နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွေကို လွယ်ကူစေပါတယ်။ သွားရေးလာရေးမှာလည်းလွန်စွာ အဆင်ပြေပြီး Vending Machine တွေကိုလည်း နေတိုင်းလိုလိုမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေအပြင် ခရီးသွားတွေအတွက်ပါ လုံခြုံစိတ်အချရဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းစည်းကမ်းရှိမှုကလည်း လေးစားဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်။
ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာ စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ ကောင်းမွန်သလို မျိုးချစ်စိတ် နိုင်ငံချစ်စိတ်လည်းမြင့်မားလှပါတယ်။ ဂျပန်ဘာသာစကားကိုသာ အသုံးပြုကျတဲ့အတွက် “ Excuse Me” အစား “ Sumimasen” ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ကို ကူညီဖို့အသင့်ပါပဲ။
သဘာဝရေပူစမ်း တွေအတွက်နာမည်ကျော်လှသလို J-Pop Music ကလည်း Anime တွေနဲ့အတူ ကျော်ကြားလှပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ Brand တွေကိုတောင်ဂျပန်နိုင်ငံမှာဆို ကိုယ်ပိုင်ဟန်နဲ့ မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အရောင်မပါတဲ့ ကိုကာကိုလာတို့ လက်ဖက်စိမ်း KitKat ဝါဆာဘိ Kitkat ဆိုတာမျိုးတွေအထိ အထူးအဆန်းလေးတွေကို တွေ့ရပါတယ်။ Maid Cafe တွေဆိုတာလည်း ဂျပန်မှာ နာမည်ကျော်ပါ။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သမိုင်းအမွေအနှစ် များ နှင့်အထူး ခေတ်လွန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုပါ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ တွေ့မြင်နိုင်မှာမို့ အလည်အပတ်တစ်ခေါက်လောက်တော့ အရောက်သွားသင့်ပါတယ်။
Japan #Sakura #Why_Should_Visit_to_Japan #TT
Credit : Thin Thiri San